06 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: သြဂုတ်လ62019
Cevizliရေကိုရေနံတင်သင်္ဘောဝင်တိုက်ရန်အလမ်းရထားထံမှငွေချေးစာချုပ်ထဲမှာ Topkapi ဦးတည်ချက်။ Bağcılar-ထွက်တင်ဆောင်နေစဉ်မတော်တဆမှုဦးဒဏ်ရာရCevizliTopkapi ကျောက်ခေတ်အချိန်နှောင်ကြိုးများနှင့်ယင်းအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ပုံမှန် 45 မိနစ်ပြန်လာ၏။ လမ်းရထားမတော်တဆမှုကြောင့်အချိန် bidirectional, အစ္စတန်ဘူလ်အခင်းဖြစ်ပွားရာဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များရပ်တန့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် [ပို ... ]
İvedikမြေအောက်ဘူတာရုံAkköprüအကြားပြောင်းလဲဘယ်သူက ray ကစားသမား
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, Başkentlilerနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာလေ့လာမှုပို့ချနေသည်ပေးနိုင်ရန်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။ အသစ်လမ်းကြောင်းဘတ်စ်ကားမြူနီစီပယ်တဦးတည်းလက်, လက်ရှိမြေအောက်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားစနစ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်စတင် [ပို ... ]
စားရအစားအစာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်ဆုံးသုံးနှစ်ကြာ 114 406 တထောင်သန်းတန်ဖိုးရှိ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများဝန်ကြီးဌာန CHP Tanrikulu ထံမှတုံ့ပြန်မှုသည်နှင့်အညီနောက်ဆုံးသုံးနှစ်ကြာအစားအသောက်ဝယ်ယူမှုများအတွက်မေးဝန်ကြီးဌာနအစားအစာစားသုံးမှု၏သန်းတထောင် 2016 2019 114-406 နှစ်အကြားတန်ဖိုးရှိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါဟာအစားအသောက်စားသုံးမှုန်ဆောင်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီတက်လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ဖော်မခံခဲ့ရ [ပို ... ]
စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa Varank, တူရကီရဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (TOGG) ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာအစည်းအဝေးဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကားကိုသုံးဖက်မြင်မော်ဒယ်ပရောဂျက်ဝန်ကြီးများ Varank ပြသခဲ့သည်။ TOGG နိုင်ငံတော်သမ္မတတော်လ်ရီဖက်Hisarcıklıoğlu, တွစ်တာအကောင့်, ဒါရိုက်တာတူရကီရဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအုပ်စုဘုတ်အဖွဲ့ [ပို ... ]
Quit ဖို့အစ္စတန်ဘူလ် 454 odometer အတွက်ရထားလမ်းအရှည်
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဆောက်လုပ်ဆဲ 221,7 ကီလိုမီတာရထားလမ်းပြီးစီးသောအခါ, တည်ဆဲရထားလမ်းအရှည်ကီလိုမီတာအပိုင်းနှင့်အတူမြို့ 233,05 454,75 ကီလိုမီတာရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အသွားအလာအပေါ်အလေးပေးမှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်။ ယနေ့သကဲ့သို့, မြို့ 233 [ပို ... ]
3 10 တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး3၏လျှပ်စစ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ်များ၏ TCDD ခရိုင်နံပါတ်အကာအကွယ်မဲ့Mıntıkaအဆင့် Crossing အလိုအလျောက် Barrier လုပ်ခြင်းအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယ်ယူခြင်း၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်ရေးဌာန (TCDD) 2019 / 305853 JCC [ပို ... ]
သငျသညျကိုဦးစားပေးသင့်တဲ့သူကိုသိအဖြစ်နှစ်သိမ့်အဘို့လူသိများခံရဖို့လိုလားသူကားထဲတွင်ခရီးသည်မဟုတ်ဘဲသူတို့သာအဆင်ပြေစီးဘို့, မြေအောက်ရထားကားများ၌ဤဦးစားပေးစီးဖို့ပိုပြီးအဆင်ပြေ။ ထို့အပွငျ်ရောက်စွက်ဖက်ဟန့်တားဖို့မော်တော်ယာဉ်ဝင်ရောက်နှင့်မထွက် [ပို ... ]
ဂျာနယ်တွင် Raillif "မီးရထားအဆိုတော်များ Charm" ၏သြဂုတ်လပြဿနာအတွက် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆောင်းပါးထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သောမကြာသေးမီနှစ်များတွင်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူသင့်လျော်သောမီးရထား TCDD အထွေထွေမန်နေဂျာ၏မိန့်ခွန်း, ဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ဤအဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ရလဒ်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အဖြစ် [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီးသြဂုတ်လအတွင်း Mehmet Cahit Turhan Raillif မဂ္ဂဇင်း၏နံပါတ် "တူရကီပိုင်ခွင့်ကုန်သွယ်ရေးယာဉ်တန်းဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်" ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ Turhan တရုတ်ထံမှခြင်းနှင့်ထိုအရပ်မှကာဇက်စတန်နှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်မှစတင်တူရကီထွက်သို့ရောက်ရှိအမှု၏မိန့်ခွန်း [ပို ... ]
Start ကိုဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများပေးရန် Kahramanmaras မွေးမြူရေးချိန်း
Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဦးစီးဌာနလေ့လာရေးခရီး၏ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ကြေညာချက်အပေါ်6မွေးမြူရေးချိန်းဖို့အင်္ဂါနေ့ကသြဂုတ်လ 10 စတင်ခဲ့ပြီးစနေနေ့သြဂုတ်လနေ့တိုင်အောင်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဧဝကိုကဆိုသည်။ Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရပ်တန့်တံဆိပ်အနေဖြင့်မော်တော်ယာဉ်ရွေ့လျား [ပို ... ]
ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာမတော်တဆမှု, ယာဉ်မီး, ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အတူတပ်မတော်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကို Maintenance စစ်ဆင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနဦးစီးချုပ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ကိုတိုးမြှင့်ဆက်လက်နိုင်ရန်အတွက်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ရပ်များနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းသေချာ [ပို ... ]
နိုင်ငံသားစိတ်ကျေနပ်မှုများကရှေ့ပြေးမြို့တော်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမည့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအတ္တ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာမော်တော်ယာဉ်များနှင့်မော်တော်ယာဉ်ယာဉ်မောင်းများအတွက်လယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းပိုပြီးမကြာခဏခဲ့ကြသည်။ နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်စာရင်းစစ်လုပ်ဆောင် [ပို ... ]
Mersin အတွက်ပှဲအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး disinfected ခဲ့ကြသည်မီ။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့များသည်မြို့ပြတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသေးစိတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်လေ၏။ အဆိုပါအဖွဲ့များအဖြစ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သန့်ရှင်းရေး [ပို ... ]
Sakarya-တူရကီ၏ Sunflower ချိုင့်စက်ဘီး MTB အဓိပတိဌာနမှူးအတွက်တူရကီရဲ့အများဆုံးခေတ်သစ်စက်ဘီးစီးအဆောက်အဦတစ်ခုမှာချန်ပီယံရှစ်ပါဝင်ခဲ့ "ကမ္ဘာ့ဖလားတောင်ဆိုင်ကယ်ကမ္ဘာ့ဖလား 2020 ဗျာဒိတ်ရူပါရုံချန်ပီယံရှစ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်ယူပါလိမ့်မယ်။ 2020 နှစ်ပေါင်းအောက်ရှိမစ္စတာစက်တင်ဘာလ၌အကြှနျုပျတို့၏နိုငျငံတျောသမ်မ [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆက်လက်သမျှသောရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အဆင်ပြေ access ကိုပေးအမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများ။ ယာဉ်အသွားအလာစီးဆင်းမှုအရှိန်မြှင့်ဖို့အသစ်ဆောက်လုပ်ထားလမ်းများ, တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်နိုင်ငံသားများမှအဆင်ပြေသည်။ Çayırova၌ဤဦးတည်ချက်အတွက် [ပို ... ]
Salim Dervişoğluရိပ်သာလမ်း3။ ကတ္တရာပထမဦးစွာအဆင့်အတွက်စိုက်ထားသော
Izmir 2030 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းစားပွဲပေါ်မှာ
Izmir ၏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ခရိုင်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပေးသွင်း၏ 2030 ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ် shared ။ ပထမဦးစွာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီးစီးစီမံကိန်းများကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏အာရုံစူးစိုက်တည်ကြသည် ဖြစ်. , ငါးနှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ Izmir မြို့တော်စည်ပင်က forrn [ပို ... ]
Kocaeli ၏ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် affiliates Inc ကိုဤနေ့အထိစုစုပေါင်းနေရာချပေးသည့်အဝေးပြေးကား Terminal နှင့် 20176လူဦးရေသန်းကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောက်ယူulaşımparkနိုင်ပါစေ။ ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက် 2019 1 သန်းဧည့်သည်များ 734 854 တထောင်ဧည့်သည်များအတွက် [ပို ... ]
လုပ်ဖို့SAMULAŞန်ထမ်းအကယ်ဒမီ '' စာနာ '' ထက်တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးပိုပြီး!
Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်SAMULAŞ, ဝန်ထမ်းများအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအကယ်ဒမီ site ကို။ SAMULAŞန်ထမ်းများ, 'Eğticပညာရေး' 'အော' 'Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါ Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သင်တန်းစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောက်လုပ်ရေးရွက်လှေပို့ဆောင်ရေးရှောက်သွား။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc ကို (SAMULAŞ), '' သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲ့ [ပို ... ]
ယခု Mega အဝေးပြေးစီမံကိန်း 3,5 နာရီနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ် Izmir ကြား
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းတနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ4အခမ်းအနား Bursa အတွက်ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြစ်ဒုတိယသမ္မတအဝေးပြေးလမ်းမကြီးသမ္မတ Fuat Oktay တူရကီအဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးအမ် Cahit Turhan, တရားရေးဝန်ကြီး [ပို ... ]
တူရကီ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan သမ္မတနိုင်ငံ, Bursa-Izmir ကားလမ်းနှင့်အတူဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်ရဲ့ကျေးဇူးတရားဟာသမိုင်းဝင်နေ့ကထက်, အဝေးပြေးပူးတွဲဖွင့်ပွဲမှာသူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ Bursa စီးတီးဆေးရုံနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir တည်ရှိသောBadırgaတှငျကငျြးပခဲ့ [ပို ... ]
ယနေ့တွင်အတွက်သမိုင်းသြဂုတ်လ61968 Eskişehirမီးရထားစက်ရုံဇာတိစက်ခေါင်းထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။